Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federalka Soomaaliya G/sare Max’d Aadan Jimcaalle Koofi iyo wafdi uu hugaaminayo oo ka degey xarunta kmg Galmudug ee Cadaado. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federalka Soomaaliya G/sare Max’d Aadan Jimcaalle...
Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federalka Soomaaliya G/sare Max’d Aadan Jimcaalle Koofi iyo wafdi uu hugaaminayo oo ka degey xarunta kmg Galmudug ee Cadaado.
Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawlada federalka soomaaliya G/sare Maxa’d Aadan Jimcaale KOOFI iyo wafdi uu hugaaminayo ayaa ka degey xarunta kmg maamulka Galmudug isagoo hawlo shaqo u tegey halkaas.
Taliyaha ayaa u kuur gelaya hawlaha socdaal ee garoonka diyaaradaha magaalada cadaado maadaama ay isku xiranyihiin garoomada dalka ayna ka jiraan dhaq haqaaqyo iyo duulimaadyo badan garoonka cadaado ayuu taliyuhu waxa uu la wadaagi doonaa maamulka Calmudug iyo kuwa garoonkaba hawlaha socdaalka iyo nidaamka dalka u degsan.
Taliye Koofi ayaa beryahan wadey tababaro la xiriira sare u qaadida aqoonta shaqaalaha iyo madaxda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federalka soomaaliya iyadoo laga billaabey shaqaalaha ka hawl gala Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde mid taas lamid ahna ay u baahanyihiin kuwa ka hawl gala garoomada maamul goboleedyada ka tirsan dawlada federalka soomaaliya.
Waa markii ugu horeysey ee taliye ama madaxda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya uu hawlihiisa ku baahiyo gobolada dalka taas oo keeni jirtey qaladaad ka dhaca hawl wadeenada garoomada,waana taas midda loo maleynayo in ay la xiriirto socdaalka Taliye Maxa’d Aadan Jimcaale KOOFI uu ku tagey xarunta KMG Galmudug ee Cadaado.
Previous articleSomaliland oo shaacisey in la faafiyey KHariidad qaldan laguna kala qeybinayo G/Sland.
Next articleQandala oo maalintii labaad duqeyn ku socoto iyadoon la ogeyn cid wax ku noqotey.